Adobe Digital Insights: Steeti nke Digital Union 2017 | Martech Zone
Adobe Digital Nghọta agbakọtawo ọnụ mara mma infographic (ànyị ga-atụ anya ihe ọ bụla dị iche?) Na Ala nke Digital Union - lekwasịrị anya digital mgbasa ozi na atụmanya ndị ahịa metụtara. Ikekwe ihe kachasị amasị m gbasara infographic a bụ na ha were ọtụtụ data ma jikọta ya na ọnụọgụ nhọrọ nke nkwubi okwu na nkwubi okwu:
Ego Ad na-arị elu - dị ka ndị ọzọ na-akpọsa ngwá ahịa na-abanye na dijitalụ, ọchịchọ maka ohere mgbasa ozi na ụgwọ ndị metụtara ya na-arịwanye elu. Nchọgharị ego na-akwụ ụgwọ-kwa-pịa (CPC) ebilila 11% n'etiti 2014 na 2016. Ngosipụta ngosi mkpanaka-kwa-puku (CPM) ebilila 12%, na mgbasa ozi vidiyo arịgogo 13%. Ezie na ina bụ akụkụ nke akụkụ, M na-na-achọsi ike ma ọ bụrụ na ụba ezubere iche technology na-emeri nloghachi na ego.
Nhọrọ ihuenyo na-abawanye, mana oge na saịtị dị ala - Ugh… ọ na-akpasu m iwe na ụwa nke ị bụbiga ihe nkiri na-ekiri na Adobe na-ekwu, "anya na-adịru ka na-shrinking". Oge dị ala na saịtị ahụ apụtaghị na ị kwụsịla ilebara onye ọbịa anya. Ndị mmadụ na-arụ ọtụtụ ọrụ ma na-eme nyocha n'ịntanetị na plethora nke nhọrọ. Yabụ, ọ bụrụ na e nwere ọtụtụ vidiyo na otu isiokwu, na-atụ anya ka ndị ọbịa gị pụọ iji nyochaa nhọrọ ha niile tupu ị na-elele. na weebụsaịtị n'afọ karịa afọ. Nhọrọ dị mma na asọmpi na-aga n'ihu na-abawanye na nnweta.
Uto dị mfe, njigide siri ike - N’afọ atọ gara aga, ụlọ ọrụ ndị na - eto eto hụrụ ịrị elu 30% na ndị ọbịa ọhụụ mana 73% nke ndị ọbịa oge mbụ anaghị alaghachi.
Uchechukwu Onwuchekwa - 40% nke ụlọ ọrụ nwere ọtụtụ nyiwe Martech, teknụzụ, na silos, na-eme ka o sie ike ịgbaso atụmanya ma ọ bụ njem ndị ahịa n'ofe ngwaọrụ na nyiwe.
Ndị ahịa Anaghị Ekele Maka Mgbasa Ozi - A na m achọkarị ịmatacha eziokwu ahụ bụ na 58% nke ndị na-ere ahịa na-ekwu na ha ka mma irute ndị ahịa mana naanị 38% nke ndị ahịa kwenyere Nke bụ eziokwu bụ na, ebe ndị ahịa nwere ike ọ gaghị ahụ mgbasa ozi n'anya. Ihe dị nsọ maka ndị na-ere ahịa bụ ịzụlite ọdịnaya nke enwere ekele, bara uru ma kwalite n'ụzọ na-atọ ụtọ maka atụmanya ha.
Experidị Ahụmịhe Ndị Dị n'Otu - Nọgide na-abawanye na mkpa ka ndị ahịa na-achọ itinye aka na ụdị n'ụdị ha nwere ekele. Ọ na - arụkwa ọrụ - ọkwa ọrụ nke jikọtara teknụzụ na ihe okike hụrụ 54% karịa nleta karịa afọ abụọ gara aga.
Iji chịkọta ihe ọmụma a, Adobe nwetara site na nleta weebụsaịtị 741, nde ijeri mgbasa ozi 450 na vidiyo 11 na-amalite. Chaị!
Tags: 2017nnwetaad-akwụ ụgwọadobeadobe di omimiAnalyticsAttributionnnukwu datannukwu ihuenyoKeduahụmahụ ahịanhazi usoro nhazi datadesktọọpụdigital mgbasa ozimbụ onye ishimobile ngosipụta cpmmkpanaka ọchụchọ cpconye obia ohurunjigidesilossmartphoneoge ejiri na saịtịtvndị ahịa dị n'otuvideo mgbasa ozivideo mgbasa ozi
Ntuziaka kachasị na otu esi ere na Amazon